Ilaaha daa'imka ah
portal diinta on Catholicism
Masiixa iyo rasuullada
Ku saabsan diinta
ka hadal ilaah
Maxay yihiin hadiyadaha aan helno baabtiiska?
Category: ka hadal ilaah 0
Magaca aynu helno marka nala baabtiiso? Waa in laynoo baabtiiso cafiska dembiyadeenna Rasuul Butros wuxuu ku waaniyey: “… Toobad keena, oo midkiin kasta ha lagu baabtiisay magaca…
Su'aasha Inta badan La Isweydiiyo: Waa maxay Kaysar Kitaabka Quduuska ah?
Waa maxay Kaysar kitaab ahaan? Erayga "Caesar" ayaa inta badan loo adeegsaday, wadamada leh dhaqanka Masiixiga, si loo aqoonsado awoodda ku meel gaarka ah (oo lid ku ah awoodda ...
Waxaad waydiisay: Sidee bay dib u habeyntii diintu ahayd?
Maxaa loola jeedaa dib u habeynta diinta? WAA MAXAY DIB-U-habaynta DIINTA… Dib-u-habaynta Protestant-ama, si fudud, dib-u-habaynta-waxaa loo yaqaan dhaqdhaqaaqa diimeed ee Masiixiyiinta ee ka bilaabmay Jarmalka gudaha…
Jawaabta ugu Fiican: Maxay ka dhigan tahay in la tukado novena?
Sidee lagu wacdiyaa ereyga Eebbe? Sidee loo sameeyaa novena? Si aad u tukato novena-kan waa inaad maalin kasta tukataa salaadda si ay u bilaabato, salaadda...
Su'aal: Kumuu ahaa Boqor Saa'uul marka loo eego Baybalka?
Yaa dilay Boqor Saa'uul oo Kitaabka Quduuska ah? Boqorkii dhaawaca ahaa, isagoo u malaynaya in reer Falastiin ay qabsan doonaan, oo wuxuu weyddiistay kii hubkiisa u siday inuu dilo, laakiinse...
Waa maxay damaca kaniisadda Katooliga?
Baybalku muxuu ka yidhi damaca? Sidaa darteed, damaca waxaa lagu tiriyaa dembi ama dhaqan xumo, sida ku cad Baybalka kitaabka...
Waa maxay ilaaha diinta dhaqameed ee Shiinaha?
Waa maxay diinta dhaqanku? Diimaha dhaqameedku waxay ku salaysan yihiin xaflad aad u adag oo ay is dhaafsanayaan dadka nool awoowayaashood iyo sidoo kale…
Waa maxay shaqooyinka Kaniisadda Katooliga?
Waa maxay shaqada Kaniisadda Katooliga? Saddexda hawlood ee muhiimka ah waxa ka mid ah: Bar, Quduus iyo Dawlad, kuwaas oo sameeya unug; taas aawadeed...
Waa maxay dembiga dilaaga ah ee Ban?
Waa ayo 7-da dembi ee dilaaga ah? Ban (Nanatsu no Taizai) Ban (Nanatsu no Taizai) Mamnuuci Shaqaynta Xubin ka mid ah Todobada Dembi ee Dilaaga ah Asal ahaan kaynta Boqorka Fairy ee Boqortooyada Libaaxyada…
Su'aal: Sidee ayay Roomaanku u ekaayeen Masiixiyadda?
Maxay Masiixiyiinta u silciyeen Roomaanku? Sababta ugu macquulsan ee loo dhibaateeyay waxay ahayd, dhanka yuhuudda, bidcada cad ee in…
1 2 ... 6,338 Next
Khudbadiisa, wuxuu baray kaniisadaha in shaqadu aysan ahayn habaar, laakiin ay tahay habka badbaadada, sidaas darteed Arcangelo Tadini wuxuu si aan toos ahayn u saameeyay horumarinta waxbarashada bulshada ee Kaniisadda Katooliga.
Muxuu Ciise ku shubay rasuulladii?
Sidee looga gudbi karaa qadhaadhka sida uu qabo Baybalka?
Waa maxay Xaqiiqda Diineed iyo asalkeeda?
Goormuu Ciise doortay 12-ka rasuul?
Maxaa ku dhacay Yuudas markuu gacan geliyey Ciise?
Waxaad waydiisay: Waa maxay macnaha cawska ee Baybalka?
Jawaabta ugu Fiican: Muxuu Baybalku ka yidhi Mordekay?
© 2022 Ilaaha daa'imka ah
XUQUUQDA FIIRO GAAR AH! Dhammaan agabka waxaa lagu dhejiyay goobta si adag ujeeddooyin macluumaad iyo waxbarasho ah! Haddii aad aaminsantahay in dhajinta shay ay ku xad gudubto xuquuqdaada daabacaada, fadlan hubi inaad nagala soo xiriirto foomka xiriirka oo alaabtaada waa laga saari doonaa.